Apple iPhone varotra flatline toy ny fitomboana tsara latsaka fohy ny zavatra andrasana - News Fitsipika
Apple iPhone varotra flatline toy ny fitomboana tsara latsaka fohy ny zavatra andrasana
Sales ny ny tampony-nitombo ny fivarotana fitaovana ihany 0.4% ny fety, ampitahaina amin'ny 46% ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa, fa ny orinasa Lahatsoratra firaketana an-tsoratra vola azo
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Apple iPhone varotra flatline toy ny fitomboana tsara latsaka fohy ny zavatra andrasana” dia nosoratan'i Sam Thielman in New York, ho an'ny The Guardian tamin'ny Talata 26 Janoary 2016 21.49 UTC
Apple ny iPhone varotra no flatlining, ny teknolojia vahoaka nanao tamin'ny Talata, tahaka ny nanambara maranitra mihena firy amin'ny varotra fitomboana noho ny tampony-mivarotra finday fitaovana.
Ny orinasa nivarotra ny flagship 74.8m ny fitaovana ao amin'ny telo volana farany amin'ny 2015, ambany mpandalina 'andrasan'ny. Dia araka izany vanim-potoana in 2014 ny orinasa nivarotra 74.46m iPhones, izay midika hoe varotra ireo fisaka indrindra.
Varotra ao amin'ny iPhone kaonty nandritra ny roa ampahatelon'ny ny Apple ny vola miditra, izay mampanahy mpamatsy vola sasany. "Apple dia orinasa iray-vokatra,"Nanambara ny Adnaand Berenberg Ahmad tamin'ny taon-dasa, raha ny alemà banky downgraded ny orinasa tahiry mba "mivarotra".
Firaketana an-tsoratra isaky ny telo volana Apple nandefa vola miditra ny $ 75.9bn sy ny firaketana an-tsoratra isaky ny telo volana tombony ny $ 18.4bn, fa nampitandrina ny vola azo tao an-tanàna izany no lavo.
Lehiben'ny mpanatanteraka Tim Cook manamboninahitra nanao hoe:: "Ny toerana ara-bola dia tsy mbola natanjaka." Hoy izy hoe Apple nanana "ny renin'ny mizana taratasy rehetra" amin'ny fananana miisa $ 293bn, amin'ny $ 205bn izany amin'ny vola. Nilaza koa izy fa amin'izao fotoana izao ny orinasa manana fitaovana mavitrika 1bn mavitrika - lehibe niavaka, hoy izy:.
Ary koa ny iPhone lasa miadana kokoa varotra Apple nilaza izany nivarotra vitsy lavitra iPads amin'ny telo volana 2015, 16.1M, nidina avy 21.4m takela-bato teo amin'ny lafiny izany tamin'ny taon-dasa. Mac varotra, koa, dia eny, na tsy tanteraka: ny orinasa lafo 4% vitsy, ho tanteraka ny 5.3m.
Vola miditra ao ny "vokatra hafa" Sokajy, izay ahitana Apple Watch, nitombo mafy ny $ 4.4bn, niakatra avy $ 2.6bn amin'ny lafiny fahatelo ny 2015 (rehefa nitatitra voalohany ny orinasa Watch varotra). Other entana ao amin'ny sokajy ahitana mitempo Accessories, Apple Pay sy Apple TV.
Ny mihena firy amin'ny finday varotra tsy hoe mipetraka ao Apple. Maneran-tany ny fitomboan'ny finday avo lenta dia nihena ho amin'ny taha ambany indrindra hatramin'ny 2013, araka ny fikarohana mafy Gartner, fa ny famantarana izay mety ho mpanjifa mandreraka ny vaovao iterations ny iPhones afaka manana vokany lalina teo amin'ny Apple sy ny midadasika kokoa tahiry US tsena.
Koa satria Apple niditra ny tsena ao amin'ny finday avo lenta lafiny fahatelo ny 2007, ny orinasa lafo 821m iPhones. Sales ny iPhones efa fototra hery ao ambadiky ny fanaovana Apple ny orinasa lehibe indrindra manerana izao tontolo izao.
Tao anatin'ny valo taona sy tapany, goavam-be ny teknolojia upended ny finday tsena, nampivaloharika ny dia-manjaka BlackBerry sy nanery ny orinasa manontolo mba jerentsika fanavaozana toy ny touchscreen interface tsara, haptic feedback sy ny fampidirana fivarotana mozika.
Ny orinasa no tena lehibe amin'izao fotoana fa misy Apple mandeha, ny tsenam-matetika manaraka - ary Apple nizara midina. "Apple ahitana ny 7% ny fitambaran'ny S&P 500 vola,"Hoy Angelo Zino ny S&P Capital IQ. "Izany dia midika hoe handeha manana fiantraikany goavana tsy ho an'ny Apple, fa ho an'ny Apple ny famatsiana. Izany 7% isa no fotsiny for Apple. Misy be dia be ny orinasa hafa toy ny Best Buy izay mifamatotra ho azy ireo. "
Raha ny iPhone iray mahatalanjona no fahombiazana, Apple no tsy nanana vintana sy ny vokatra vaovao. Sales ny iPads no stalled sy ny Apple Watch no mbola mba hanaporofoana ny tsena faobe antso.
Steve Jobs mihazona ny iPhone voalohany tamin'ny Janoary 2007. Sary: Paul Sakuma / AP
Tsy misy manisa Apple avy, fa ny vaovao goavana mametraka tsindry amin'ny Cook mba ho azo antoka ny iPhone 7 manana mahomby bitany any aoriana any 2016. "Na dia eo aza ny Oliravina na ambany tari-dalana, ny tahiry manana ny hery anaty mba na dia varotra ambony,"Hoy Zino. "Ho hitantsika eo; ny olona manontany raha toa izao no fara tampony ao amin'ny iPhone varotra, ary raha hoy izaho tsy. "
Ny orinasa fampidirana ny iPhone 6 Plus herintaona talohan'izay manao fampitahana mijery indrindra draharaha; Zino fa ny tsena sy ny mifandray amin'izany orinasa Apple dia manantena ny Hiverina - ary avy eo dia ny sasany - avy amin'ny fanambarana ao amin'ny iPhone 7.
Fidiran'ny finday avo lenta no lasa miadana kokoa any Etazonia ho toy ny tsena ta- nora - vitsy dia vitsy ny Amerikana no nanangana ny teknolojia ho an'ny fotoana voalohany, ary toy izany koa ny sasany fitomboana io dia avy undercutting mpifaninana, fa tsy manao niova fo.
ao Shina, izay Apple no nampiasa ny toe-karena ny firenena boom mba hitandrina iPhone varotra miroborobo, ny hoavy toa tsy dia azo antoka. Hoy Cook Apple efa tratra ny 77% mitombo ao amin'ny iPhone varotra ao amin'ny firenena. "Kanefa ireo vokatra miavaka, nanomboka ny mahita ny sasany malemy ilay manjarano ara-toekarena kokoa Shina tao anatin'ny volana, indrindra indrindra any Hong Kong,"Hoy Cook.
23012	0 Paoma, Article, Business, Financial, iPhone, Main section, Finday, News, isaky ny telo volana vokatra, Sam Thielman, Smartphone, Teknolojia, The Guardian
← 10 Zavatra tsy fantatrareo Zaza Mety ve [Listverse] The 6 Mampidi-doza Indrindra Foods →